Akwụkwọ | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Blaginina Elena: akụkọ ndu na ihe okike
Blaginina Elena, onye ihe gbasara ndu ya na uwa nwata bu onye ama ama na onye ntughari ama ama na Russia. Ihe karịrị otu ọgbọ na-eto eto etolitela n'ụdị abụ dị mma na obi eziokwu nke onye edemede, isiokwu nke ọrụ ya bụ ihe kwere nghọta ...
Thegba egwu "ọhịa n’oge mgbụsị akwụkwọ" - Twardowski dere obere ọkaibe
Ọmarịcha onye Russia na-ede uri A.T. Twardowski gbakọrọ ọtụtụ ọrụ. Onye ama ama n’etiti ndị nkịtị, o jisiri ike n’ọrụ ya, dị ka Sergei Yesenin, iji gosipụta ịma mma niile nke ọdịdị Russia na nfe ya pụrụ iche…
"Njikota onu ogugu nke Captain Vrungel": nchịkọta. "Njikota nke Njigide nke Captain Vrungel" isi nke isi
Akụkọ akụkọ na-atọ ụtọ banyere ọmarịcha njem nke ụgbọ mmiri Vrungel bụ onye edemede Soviet bụ Andrei Sergeevich Nekrasov dere. Akụkọ a mejupụtara isi iri abụọ na abụọ. Ha nwere ihe omuma di egwu banyere ihe omuma nke onye ugbo ugbo nke nwere oge. Onye nkuzi…
Borodino. Lermontov M.Yu. Anụ Nyocha
N'ime oge ndụ ya dị mkpirikpi, Mikhail Lermontov dere ọtụtụ ọrụ mara mma nke na-eju anya ịma mma nke sụlips na ịdị omimi nke ihe ọ pụtara. Abụọ na-abụkarị ihe abụọ nwere mmasị: ụtọ nke okike na ịdị mfe, eziokwu nke ndị Russia. Ya mere ...
Voznesenskaya Julia Nikolaevna: akụkọ ihe mere eme, na-arụ ọrụ
Lifezọ ndụ nke nwanyị a pụrụ iche - onye na-ede uri, onye edemede na onye ozi ala ọzọ - adịghị mfe. Na mgbakwunye na ihe omume nkịtị, akwụkwọ ndụ Yulia Voznesenskaya nwere peeji ndị siri ike dịka ogige na ụlọ mkpọrọ, njirimara ...
A. Pushkin “Gypsies”: nyocha nke uri
Na mbido ọrụ ya, Alexander Sergeevich na-edepụtakarị echiche nke Byron na Russo. Ndị edemede a bụ arụsị nke nnukwu onye na-ede uri na Russia, mana oge nke ihunanya wee gafere, echiche dị iche iche wee soro ya…
Murzuk Bianchi - nchịkọta nke akụkọ ahụ
Dere akụkọ "Murzuk" Bianchi. Nchịkọta ahụ ga-ewebata onye na-agụ ya ọrụ a na-atọ ụtọ. Akụkọ malitere site na ebe dị n'ime ọhịa. Dinta Onye ode akwukwo na-ewebata onye n’agu n’otu n’ime ndi isi - nwoke ochie Andreevich.…
Eeenin, "Kachalov's Dog": ònye ka edobere ihe okike ahụ? Anyị na-ekpughe nzuzo nke narị afọ
Nnukwu onye ukwe Russia na ọkacha mmasị nke ụmụ nwanyị Sergey Yesenin mụrụ na 1895 afọ, Septemba 21 na ụdị ochie. Olee ihe dọtara ndị na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ya nke ukwuu? Na mbu, n'ezie, ọdịdị na-enweghị atụ. ...
James Aldridge, Inch Ikpeazụ. Nchịkọta nke akụkọ ahụ
J. Aldridge “Inch Ikpeazu” dere n'ụdị ọrụ ya. Onye ode akwukwo ahu kwenyere na isi ihe diri onye mebere oru bu ikpughere otu mmadu si kee ya, ijide oge umuaka gh’ara ndi umu nwanyi…
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,554.